अब अर्ग्यानिक तरकारी घरमा सजिलै उब्जाउन सकिन्छ - ज्ञानविज्ञान
सागतरकारी धेरै उत्पादन गर्ने वा छिटो पकाउने चक्करमा किसानले अत्याधिक किटासक औषधी लगायत विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यही तरकारी बजार हुँदै हाम्रो भान्सामा आइपुग्छ । यसरी हामी विषाक्त सागतरकारी खान पुग्छौ, जसले अनेकौ शारीरिक समस्या निम्त्याउने गर्छ । क्यान्सरको कारण समेत बन्ने खतरा रहन्छ ।
हाम्रो भान्साका विषाक्त सागतरकारी भित्रिने गरेका छन् । तरकारीको माध्यामबाट हामी विष सेवन गरिरहेका छौं । अहिले अर्ग्यानिक तरकारी पाउन गाह्रो मात्र होइन, असंभव नै छ ।
यस्तो अवस्थामा अग्र्यानिक सागत रकारी कहाँ पाउने ?
जबाफ हो, तपाई/हाम्रै किचन गार्डेनमा । घरको बगैंचा, बार्दली, छत वा कुनै सानो स्थानमा सागतरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि अरु केही चाहिँदैन, जाँगर भए पुग्छ । किनभने सागतरकारी रोप्न, उत्पादन गर्न ठूलो ठाउँ चाहिन्छ भन्ने छैन । सानै ठाउँमा पनि गमला वा बोरामा माटो र मल राखेर तरकारी रोप्न सकिन्छ ।
अब यसमा धेरैजसो यसकारण हच्किन्छन् कि, तरकारी रोप्ने समय छैन । विषाक्त तरकारी खरिद गर्ने समयको बचत गरेर आफ्नै बगैचा बनाउन सकिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा त के भने स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरु केहि होइन । त्यसैले अन्य कामबाट समय बचत गरेर पनि घर बगैंचामा तरकारी लगाउनु उत्तम हो । यसबाट अरु के के फाइदा मिल्छ त ?
बगैंचा, बार्दली, छत आदिमा तरकारी रोपेपछि त्यो ताजा अवस्थामै सेवन गर्न सकिन्छ । कुनैपनि तरकारी ताजा सेवन गर्दा त्यसको पोषण तत्व पनि नष्ट हुँदैन । स्वाद त छँदैछ । साग, गोलभेडा, खुर्सानी, पुदिना, धनिया, हरियो प्याज आदि ताजा खान सकिन्छ ।
आफुले उत्पादन गरेको तरकारीमा विष हुने कुरै भएन । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा त स्वास्थ्यलाई छ । जब स्वस्थ्यकर सागतरकारी पाइन्छ भने, किचेन गार्डेन किन नबनाउने ?
बजारमा सागतरकारीको मूल्य आकासिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा हामीले किसानलाई मात्र होइन, व्यापारी एवं विचौलियालाई समेत पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात हामीले सेवन गर्ने तरकारी अस्वभाविक महंगो पर्न जान्छ । तर, आफैले उत्पादन गरेर सेवन गर्दा त्यो खर्च जोगिन्छ ।
बगैंचा भएपछि त्यसमा हामी समय व्यतित गर्छौ । कहिले गोडमेल, कहिले सिंचाईको काम गरिन्छ । यसले गर्दा हामी अनावश्यक कुरा सोच्दैनौ । हाम्रो तनावको स्तर पनि कम हुन्छ ।
बगैंचा भएपछि फुर्सद हुनसाथ हामी त्यही समय विताउन थाल्छौ । रोप्ने, गोडमेल गर्ने जस्ता काममा क्रियाशिल भइन्छ । यसले गर्दा हाम्रो शारीरिक सक्रियता बढ्छ । अर्कोतिर आफैले उत्पादन गरेको कृषि उपजमा आफुलाई सन्तुष्ट प्राप्त हुन्छ, जुन सन्तुष्ट अरु कुराबाट नमिल्न सक्छ ।
Topics #अर्ग्यानिक #तरकारी
Don't Miss it यस्तो रोग ल्याउनसक्छ हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाबर्तनबाट
Up Next के हो बच्चाका लागि सन्तुलित आहार ?
छारे रोग, लक्षण, कारण र उपचार
छारे रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशु समेतमा देखा पर्ने एक किसिमको मानसिक रोग हो। यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने,…
यी तरिका अपनाएमा सजिलै आँखामा पसेका चिज हटाउन सकिन्छ
–चिसो पानी लिनुहोस् र आँखामा पानी छम्किदिनुहोस् । तपाईंले आँखा खुला गरेर बगिरहेको पानीको धारामा बिस्तारै रााखेर मिच्न पनि सक्नुहुन्छ…